Endri-javatra Propars - Fantaro ireo endri-javatra Propars!
Azonao atao ny mandefa ny vokatrao amin'ny Propars avy amin'ny tranokalan'ny e-varotra, avy amin'ny fangatahana kaonty.
na azonao atao ny mampiditra betsaka amin'ny Excel,
Na miaraka amin'ny Propars, azonao atao tsirairay ny mampiditra fampahalalana rehetra momba ny vokatrao.
Azonao atao ihany koa ny mamaritra ny vidin'ny vokatrao amin'ny tsena samihafa. Noho izany, azonao atao ny mampihatra politika momba ny vidiny amin'ny tranokala e-varotra tsirairay.
Azonao atao ny mamindra safidin'ny vokatra toy ny loko sy ny habeny amin'ny tsena rehetra amin'ny alàlan'ny famaritana sary sy vidiny samihafa.
Fitantanana trano fitehirizana
Raha manana trano fanatobiana entana mihoatra ny iray ianao dia azonao atao ny mamaritra ireo trano fanatobiana ireo amin'ny Propars. Ny tahirin'io trano fanatobiana entana io sy ny talantalana dia nohavaozina ho azy avy amin'ny trano fitehirizam-bokatra sy talantalana nandefasana ny vokatra amidinao. Amin'izany fomba izany, azonao atao ny manara-maso ny isan'ny vokatrao ao amin'ny trano fanatobiana entana.
Fitantanana ny kaomandy: Azonao atao ny mampiditra ny baiko feno izay ahafahanao mahita ny baikonao rehetra avy any Torkia na tsena vahiny amin'ny efijery tokana amin'ny Propars.
Ny antsipiriany rehetra momba ny baiko; Azonao atao ny miditra amin'ny fampahalalana rehetra momba ny nividianan'ny mpanjifa ny vokatra amin'ny efijery tokana.
Azonao atao ny manonta ireo endrika fandefasana ireo kaomandy tonga tsirairay na marobe.
Azonao atao ny mahita ny fangatahana famerenam-bola sy fanafoanana avy amin'ny tsena eo amin'ny efijery Propars.
Azonao atao ny mampifanaraka ny rafitra famerenana amin'ny Marketplaces. azonao ampiharina ny politika.
Esory amin'ny Propars ny sakana amin'ny fiteny vahiny
Ny ekipan'ny Propars dia mampianatra anao amin'ny fiofanana manokana fa ny vokatrao dia mety hahomby amin'ny tsena amin'ny karazana famaritana vokatra, sary na teny fototra.
Manomana fivoriana an-tserasera tsy tapaka izy io ho an'ireo olana ho hitanao eny an-tsena ary milaza aminao ny vahaolana.
Azonao atao ny mamindra ny vokatrao rehetra amin'ny fangatahana kaontinao any amin'ny Propars.
Miaraka amin'ny fampiharana ampiasainao, ny fampidirana feno dia omena eo anelanelan'i Torkia sy ireo tsena any ivelany.
Ny baiko rehetra avy amin'ny tsena vahiny sy Tiorka dia ampidirina ho azy amin'ny fampiharana kaonty,
Propars dia manana lisansa integrator tsy miankina ankatoavin'ny Minisiteran'ny Vola.
Azonao atao ny mamindra ireo vokatra ao amin'ny tranokalan'ny e-varotrao amin'ny Propars miaraka amin'ny XML,
Azonao atao ny manokatra ny vokatrao amidy eny an-tsena arakaraka ny firafitry ny sokajy ao amin'ny tranokalanao.
Miaraka amin'ny fanavaozana mandeha ho azy, hita taratra ao amin'ny Propars ny vokatra vaovao nampidirina amin'ny tranokalanao, ary havaozina ny fivarotanao sy ny tahiry eny an-tsena.
Azonao atao ny manova ny tahiry sy ny vidiny amin'ny fitazonana ny tranokalanao e-varotra. Ny fiovan'ny vidiny ataonao amin'ny tranokalanao dia hita taratra avy hatrany eo amin'ny tsena misy ny vokatra amidy.
Fivarotana 24 any Torkia sy firenena 54 samy hafa
Afaka mitantana amin'ny efijery tokana ianao miaraka amin'ny Propars.